ဝင်း/ဇော်ဂျီ လက်ကွက်+ ရိုက်နည်းနဲ့ရိုက်။ မြန်မာ ယူနီကုဒ် အစစ်ထွက်။ - MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT Professionals
ဝင်း/ဇော်ဂျီ လက်ကွက်+ ရိုက်နည်းနဲ့ရိုက်။ မြန်မာ ယူနီကုဒ် အစစ်ထွက်။
Posted by MyanmarNLP on November 3, 2009 at 4:11pm in General Discussion
ဝင်း/ဇော်ဂျီ လက်ကွက်+ ရိုက်နည်းနဲ့ရိုက်။ မြန်မာ ယူနီကုဒ် အစစ်ထွက် ပါပြီ။
Unicode Standard 5.2 ကို Unicode Consortium က ၁-၁၀-၂၀၀၉ မှာ တရားဝင် ထုတ်လုပ်လိုက်ပါပြီ။
Mozilla Firefox and Google Chrome browser latest version တွေကို သုံးရင် ဘာ setting မှ ပြောင်းစရာ မလိုဘဲ Unicode 5.2 မြန်မာ ယူနီကုဒ်ကို support လုပ်ပါတယ်။
လူအများ တောင်းဆိုနေတဲ့ ဝင်း/ဇော်ဂျီ လက်ကွက်+ ရိုက်နည်းနဲ့ရိုက်။ မြန်မာ ယူနီကုဒ် အစစ်ထွက်တဲ့ software ကို Win Innwa5freeware အဖြစ်နဲ့ Myanmar's NET က ထုတ်လုပ် ဖြန့်ဝေနေပါတယ်။ font အမည်က Win Uni Innwa ဖြစ်ပါတယ်။
- ဝင်း/ဇော်ဂျီ ရိုက်နေကျ အတိုင်းရိုက်ပါ။ ယူနီကုဒ် အစစ်ထွက်ပါမယ်။
- တစ်ချောင်းငင်၊ နငယ် ခြေခထောက်အတို အရှည် ရွေးစရာ မလိုပါ။ ရိုက်ချင်တာရိုက် အလိုလျောက် ပြင်ပေးပါတယ်။
- ရရစ် အကြီးအသေး ရွေးစရာ မလိုပါ။ အလိုအလျောက် ထွက်ပါမယ်။
- စလုံး ယပင့်ရိုက်ရင်၊ ဈ (စမျဉ်းဆွဲ) အလိုလို ပြောင်းပေးပါတယ်။
- ဥ ကို အသတ် ထည့်လိုက်ရင် ဉ် (ညလေးသတ်) အလိုလို ပြောင်းပေးပါတယ်။
- ရကောက် ခြေထောက် တိုတာ ရှည်တာ auto ပြင်ပေးပါတယ်။
download လုပ်ဘို့ ဒီမှာ ရေးထားပါတယ်။ http://winmyanmar.myanmars.net
freeware ထုပ်လိုက်တာဖြစ်ပြီး၊ စမ်းသုံးကြည့်ပြီးရင် error တွေ့ရင်လဲ အသိပေးကြပါ ဦးနော်။
Myanmar3 ရဲ့ 1-click installer ကိုလည်း MCF (Myanmar Computer Federation) က ထုတ်လုပ် လိုက်ပါပြီ။
second generation မြန်မာ ဆော့ဝဲတွေမှာ ရရစ် အကြီးအသေး ခွဲရိုက်ရတယ်။ တစ်ချောင်းငယ် အတိုအရှည် သတ်သတ် ရိုက်ရတယ်။
third generation Myanmar software ပြောင်းသုံးနိုင်အောင် WinInnwa5 ကို အခမဲ့ ဖြန့်ဝေပေး နေပါတယ်။
အားလုံးကို အခမဲ့ ဒေါင်းလုပ် လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Tags: 5.2, myanmar, myanmar3, unicode, မွနျမာ, ယူနီကုဒျ Share Twitter
Permalink Reply by Myint Kyaw Thu on November 3, 2009 at 4:37pm >> ဝင်း/ဇော်ဂျီ လက်ကွက်+ ရိုက်နည်းနဲ့ရိုက်။ မြန်မာ ယူနီကုဒ် အစစ်ထွက် ပါပြီ။
Bravo, I have been waiting for this!!! If I can write in Unicode and then convert to ZawGyi for posting online without making ugly texts, that would be really great!
Permalink Reply by MyanmarNLP on November 5, 2009 at 12:14am As there wasadouble post... We have deleted the other one.
So let me repost LionSlayer's post.
Reply by Lionslayer 1 day ago
1) dashboard>setting>Basic>export blog>save xml file
2)Use Officer converter by Ko Ngwe Tun to convert zawgyi encoding to Unicode and Zawgyi tags to Unicode tags
2) use officer
I don't see any option to play with export/import or database. Maybmy lack of knowledge.
Chk this out for more detail. Done by KoZT.
Permalink Reply by MyanmarNLP on November 5, 2009 at 12:42am Thank you very much for sharing and your guidelines for converting Zawgyi text to Unicode text.
Our main problem now is to reduce font size to be complaint with font spec about sizes. Saw my bug report?
Permalink Reply by MyanmarNLP on November 5, 2009 at 11:36pm BUG REPORT 6-11-09
အခု ထွက်လာတဲ့ Unicode 5.2 compliant မြန်မာ ယူနီကုဒ် စနစ်တွေမှာ- နိုင်ငံခြား ဘာသာ စာလုံး (အင်္ဂလိပ် တင်မက ဘာသာစုံ) လူ၊ မြို့၊ နေရာ နာမည်တွေ၊ စာလုံးတွေကို မြန်မာဘာသာနဲ့ ပြန်ရေးတဲ့အခါ ရိုက်မရတာတွေ အများကြီး ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ အရင်က ဖွန့်တွေ (Win font 1,2,3,4 + Zawgyi) မှာ logic / scripting ဆိုတာ မပါပါ။ မပါတဲ့အတွက် font developer တွေက ဘာမှ စဉ်းစားစရာ မလိုခဲ့ပါ။ ရိုက်သမျှ ပေါ်ပါတယ်။ အခု third generation Myanmar font တွေမှာ logic ပါလာတဲ့အတွက် ဒါတွေ ပြဿနာ တွေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ပီအိပ်ခ်ျဒီ (အမှန်တကယ် ‘ခကွေးယပင့်သတ်’ ဆိုတာ မြန်မာဘာသာမှာ မရှိပါ။)
ဂျော့ခ်ျဘုရှ် (အမှန်တကယ် ‘ယကောက်ဟထိုးသတ်’ ဆိုတာ မြန်မာဘာသာမှာ မရှိပါ။)
အခု တွေ့တဲ့ အမှားလေးတွေ တချို့ တင်ပြပါရစေ။
- ‘သည်’ ကို အချို့လူကြီးတွေက အတို ‘သှ်’ (သ+ှ+်) လို့ abbreviated form နဲ့ ရေးကြတာ တွေ့ဘူးပါသည်။ (အခု Win Uni Innwa နှင့် ရိုက်ရင် အခုပြထားသလို ကွဲထွက်နေပါတယ်။)
- လူနာမည်ကို ‘ဦး’ ဟုရေးပြီး၊ ဘုန်းကြီးနာမည်ကို ‘ဥူး’ (ဥ+ူ+း) ဟု ရေးရသည်ဟု ကျွန်တော့် ဥပဇ္ဇယ်ဆရာတော်က သင်ပေးဖူးပါသည်။ (အခု Win Uni Innwa နှင့် ရိုက်ရင် အခုပြထားသလို ကွဲထွက်နေပါတယ်။)
- စကြာ်ဝဠာ (အခု Win Uni Innwa နှင့် ရိုက်ရင် အခုပြထားသလို ကွဲထွက်နေပါတယ်။) (note: is that correct spelling? Gotta check.)
ဒါတွေအတွက် rendering engine မှာလည်း ပြဿနာ မတက်အောင်၊ opentype font scripting မှာလည်း coding ရေးနိုင်အောင် မျိုးစုံထည့်တွက်ထားခဲ့ရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း၊ အမှား ပေါ်လာနိုင်သေးတယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်တယ်။
တွေ့ရင်ပြောကြပါ ဦးနော်၊ ဆရာ/ဆရာမတို့ ခင်ဗျား။
Permalink Reply by LuZein on December 2, 2009 at 10:18am တစ်ခုခုတော့ မှားနေပါပြီ။
ကျွန်တော် ဆရာတစ်ယောက် မဟုတ်ပါ။ ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးလိုပါ၍ ခွင့်ပြုပါခင်ဗျား။
စာရိုက်ရင် ရိုက်တဲ့အတိုင်း စာလုံးအမှန်ပေါ်အောင်လုပ်ရမဲ့တာဝန် = IME နဲ့
ရိုက်ပီးသားစာကိုသာ စာလုံးပေါင်းမှန်၊မမှန် လိုက်စစ်ပေးတဲ့တာဝန် = Spelling Checker လို့ အကြမ်းဖျင်း ခံယူထားပါတယ်။
စပယ်လင်အမှားကို IME က ပေးမရိုက်တော့ မြန်မာစာဟာ နောင် စာလုံးအသစ် ထပ်မထွက်တော့ဘူးလို့များ ယူဆနေကြပါသလား ခင်ဗျာ။
ဘယ်ဘာသာ (Language) မဆို စာလုံးပေါင်းအမှားနဲ့ ရိုက်တာကို ခွင့်ပြုထားပါတယ်။ ဥပမာ။ Mac, Zuy, Kalar, Arrluu
ကွန်ပျူတာကီးဘုတ်ကို မိမိလက်လို့ သဘောထားကြည့်ပါ။
လက်နဲ့ရေးလို့ ပေါ်သမျှ စာလုံးတွေကို မှန်ကန်အောင် Render လုပ်ခြင်းက IME ၏ အဓိက Task ပါ။
ဒါကြောင့် မြန်မာဘာသာမှာ မရှိတဲ့ စာလုံးများ မရေးနိုင်အောင် IME က မကန့်သတ်သင့်ပါဘူး။
- အောက်ပါတို့ ရေးနိုင်သင့်ပါတယ်။
"မျစ်တာ" ကော "မေတ္တာ" ပါ လက္ခံသင့်ပါတယ်။ နောင်မှ "မျစ်တာ" ကို Spelling Checker က Error ပေးပြီး Translator က ""မျစ်တာ" ဟု ဘာသာပြန်စေတာ သဘာဝကျပါတယ်။
- အောက်ပါတို့ ကန့်သတ်သင့်ပါတယ်။
စာလုံးတစ်လုံးတည်းက ပင့်၊ရစ်၊ဆွဲထိုး ရှိရိုးရှိစဉ်ထက် ပိုမိုပါဝင်နေခြင်း။ ဥပမာ။ "ခ" တွင် "ယပင့်"နှင့် "ရရစ်" နှစ်ခုစလုံးပါနေခြင်း။
အက္ခရာ ဥ နှင့် ညလေး မကွဲပြားခြင်း။ စသည်ဖြင့်...
Spelling Checking နှင့် Translation Functions များဟာ သီးခြားစီ ရပ်တည်သင့်ပါတယ်။ ဥပမာ။
ဒါဆို Implementation Task လည်း နည်းနည်း Work-Load လျော့ပြီး Renendering မှာ ပို အာရုံစိုက်နိုင်ပါလိမ္မယ်။
Permalink Reply by Alex Ko Aung on November 6, 2009 at 9:35am I prefer to use unicode than zaw gyi. But now I try to type burmese language with unicode. I found many problems. Maybe I don't know how to type. I don't know how to type Myanmar with unicode. မြန်မာ But I can easily type with zaw gyi. Can you help me to teach how to use unicode easily as zaw gyi?
Permalink Reply by Alex Ko Aung on November 6, 2009 at 6:08pm Thank you Ranka for your time. Let me try as you said.
Permalink Reply by MyanmarNLP on November 6, 2009 at 6:08pm * Win Uni Innwa font နဲ့ မွနျမာလို စရိုကျကွညျ့တော့မယျဆိုရငျ Win Uni Innwa font ကို ပွောငျးပါ။
* F8 တဈခကျြနှိပျလိုကျရငျ မွနျမာလို စရိုကျလို့ ရပါပွီ။
* အင်ျဂလိပျစာ ပွောငျးခငျြရငျ F8 တဈခကျြပွနျ နှိပျပါ။
အခကျအခဲရှိရငျ ဒီမှာ မေးမွနျးနိုငျပါတယျ။
ေ + မ = မေ
ေ +ွ + မ = မွေ
ေ + မ +ှ = မှေ (သို့မဟုတျ)ေ + မ +ှ+ှ = မှေ
ွ + မ + န +ျ+ မ +ာ= မွနျမာ
ေ +ွ + က +ာ+ င +ျ= ကွောငျ
န +ှ+ာ+း= နှား
ရ +ိ+ု+း+ ရ +ာ= ရိုးရာ
auto-correct function ထညျ့သှငျးထားပါသညျ။
စြ (စလုံးယပငျ့) မှာ အမွှီးခြှနျပွီး၊ ဈ (စမညျြးဆှဲ အက်ခရာ) မှာ အမွှီးဝိုငျးပါသညျ။
ေ+ စ +ြ +း= ဈေး
ဥ (အက်ခရာ-ဥ) နှငျ့ ဉ (ညလေးအက်ခရာ) မှာ ခွထေောကျ အနညျးငယျပိုရှညျပါသညျ။
ခွထေောကျ အနညျးငယျ ပိုရှညျသော ‘ညလေးအက်ခရာ’ အလိုအလြောကျ ပွောငျးသှားမညျ။
စ + ဥ +ျ= စဉျ
ည +ီ+ ည +ှ+ တ +ျ= ညီ﻿ညှတျ
ယခငျ ဝငျးမွနျမာ စာရိုကျနညျးနှငျ့ အနညျးငယျ ကှာတာလေးတှေ ရှိပါသညျ။
တ + န + င်ျ + လ +ာ= တနင်ျလာ
သ + င်ျ +ွ + က + န +ျ= သင်ျကွနျ
မှတျခကျြ။ tilde key ဆိုသညျမှာ ဂဏာနျးအက်ခရာ 1 ရဲ့ ဘေးမှာ အမြားအားဖွငျ့ရှိတဲ့ ~ ခလုတျ ဖွဈပါတယျ။
ပါဌျဆငျ့ အက်ခရာမြား ရိုကျလိုလြှငျ-
စ + က + (tilde key) + က +ူ= စက်ကူ
ဒ +ု+ က + (tilde key) + ခ = ဒုက်ခ
သ + မ + ဂ + (tilde key) + ၈ = သမဂ်ဂ
ဗ +ြ + ဂ + (tilde key) + ဃ = ဗဂ်ြဃ
သ + စ + (tilde key) + စ +ာ= သစ်စာ
တ + ရ +ိ+ စ + (tilde key)+်ဆ + န +ျ= တရိစ်ဆာနျ
ဝိဇ ~်ဇာ= ဝိဇ်ဇာ
ဣ +ေ +ွ + န + (tilde key) + ဒ = ဣန်ဒွေ
﻿သ + တ + (tilde key) + တ +ု= သတ်တု
ွ + ပ + (tilde key) + သ + န +ာ= ပွဿနာ
ရိုကျရတာ အရမျးလှယျတဲ့ မွနျမာစာ စနဈဖွဈတယျ။ ရဈ အကွီးရိုကျရိုကျ၊ အသေးရိုကျရိုကျ အလိုလြောကျထှကျတယျ။ ဈခြောငျးငငျတို့၊ နငယျတို့ကို အတိုရိုကျရိုကျ အရှညျရိုကျရိုကျ အျောတိုမတျတဈဘဲ။ ဒါကို ယူနီကုဒျ အစဈလို့ချေါတယျ။
အရငျ ‘ဝငျး’ မွနျမာစာစနဈ (ဝငျးကို ပုံတူ ကူးထားတဲ့ ဇျောဂြီစနဈ) နဲ့ ရိုကျနကေတြဲ့သူတှေ အားလုံးအတှကျ အထူး အဆငျပွတေယျ။
အမြားသုံးတဲ့ ဝငျးမွနျမာစာစနဈအတိုငျးဘဲ ရိုကျရတယျ။ ယူနီကုဒျရမယျ။
Permalink Reply by Alex Ko Aung on November 6, 2009 at 6:49pm Is it compatible with Vista? I really cannot type some မြန်မာစကားလုံး. I also got the attached error. I downloaded everything as you mentioned and installed already.
Permalink Reply by Kyaw Zaw on November 6, 2009 at 7:28pm Alex, it doesn't compatible with Vista yet. Below is the extract from the email.
Dear Win Myanmar Systems user,
Thank you for your interest in downloading Win Innwa font.
Win Innwa5(Unicode freeware version) can be downloaded at:
(NOTE: This version is for Windows XP only.)
We'll release Vista and Windows7 versions soon.
Permalink Reply by Alex Ko Aung on November 6, 2009 at 7:42pm I saw that note. But I am so eager.... :D
Permalink Reply by MyanmarNLP on November 7, 2009 at 12:46pm Dear geeks and guru's.
Thanks for testing and feed back.
We really do value testers.
In Microsoft Corp, every "product team" of 15 (for example), there usually is 'equal-size of groups', as
In Myanmar (especially when we are small), most of us have, say.. (inateam of 15)
14 programmers with
Mistakes of forming teams like this causes such unnecessary problems. It'savivid lesson. :)
How is it in your office?